Ihe mgbochi: Otu esi wepucha Weebụ Weebụ Iji Iji Mgbati Google Chrome
Nchapu ihuenyo bụ ihe ederede na-agụ saịtị ma wepụ ihe ọmụma bara uru site na weebụ. Nyocha ihuenyo bụ ngwọta kasịnụ iji nweta data sitere na weebụsaịtị na ibe weebụ na Microsoft Excel. Nchịkọta ihe ntanetị Google Chrome bụ ihe dị ike ngwa ncha ihuenyo nke na-arụ ọrụ ma Windows ma Mac OS.
Gịnị mere nkwụsịtụ Google Chrome ji ehichapụ?
Google Chrome extension scraper bụ ngwa ngwa scraping ngwá ọrụ na-aga n'efu na Chrome Web Store - steam ejector equations. A na - arụ ọrụ a na - emecha ihe na ihe nchọgharị Chrome dịka ngwa mgbakwunye. Ihe mgbakwunye ahụ na-enye ndị na-ede blọgụ na ndị ahịa ahịa ohere weghachite data site na ibe weebụ site na ịpị aka na otu mmewere. '' Ntucha yiri '' kwesịrị igbasa na ihuenyo gị ma ọ bụrụ na i jiri aka nri pịa otu mmewere.
Okwu Mmalite ka XPaths
XPath bụ asụsụ mmemme eji achọta ozi dị mkpa na akụkụ XML. The HTML faịlụ bụ ihe atụ magburu onwe nke usoro XML. A na-ejikarị XPath họrọ ọnụọgụ iche. Na nke a, XPaths ga-eji iji chọpụta ihe ederede ka ewepụtara na ibe weebụ. XPaths ga-enye aka ichoputa aha ndi mmadu na nọmba ekwentị ndi MPs.
Iji nchịkọta nke Google Chrome iji nweta nkọwa adreesị nke 349 Swedish MPs
Na Chrome's Scraper, iwepụta ozi site na ibe weebụ ọ bụghị naanị dị mfe ma kediegwu. Ị ga-enweta usoro ahụ na Usoro n'onwe ya.
Weebụsaịtị ahụ depụtara ndị òtù Sweden na adreesị ha. Iji malite, pịa bọmbụ ọ bụla ma họrọ "Wepụ ihe yiri ya. "Ị ga-ahụ ihe ngosi na-esonụ na ihuenyo gị.
Ọ bụrụ na i jiri aka nri pịa otu MP na họrọ "Nlele elekere," a ga-ahapụta ndepụta mkpụrụ edemede n'okpuru "" grid_6 alpha omega. ihe nchoputa ihe nchoputa bu "klas. A ga-eji nzọụkwụ abụọ mee ihe iji kpochapụ ibe weebụ a. Nzọụkwụ otu ga-agụnye ịhọrọ mkpado gụnyere nke MPs data na XPath. Nzọụkwụ abụọ ga-agụnye iburu akụkụ ụfọdụ nke data dị ka aha aha, aha, na nọmba ekwentị ma hazie data na ogidi.
Gwuo n'ime ihe ntinye HTML ma debe ihe ndị ahụ. Dee mkpado iji chọpụta nọmba mkpado kwekọrọ na ihe dị na nhazi gị. Chọpụta njirimara ikpeazụ gụnyere nke data ezubere iche. Gbaa ule XPath na nhazi ahụ site na ịpị "Nchapu. "
A ga-egosipụta listi gụnyere 349 ahịrị na ihuenyo gị. 349 na-anọchi anya ọnụ ọgụgụ zuru ezu nke ndị MPs Swedish.
Gbanyụọ data etinyere n'ime ogidi. Lelee koodu HTML na ibe weebụ ị na-eji. N'okwu a, iberibe a ga - amịpụta bụ nke a pụta ìhè n'oge a. Fanye XPaths na ogidi oghere kere wee pịa "Ichapu" iji mee ka ngwa mgbakwunye.
Ọ bụrụ na ị nwere ihe ọmụma nke ọma nke XPaths, mmemme mmemme agaghị abụ ọrụ siri ike maka gị. Nzọụkwụ ndị dị n'elu a na-eduzi gị na esi esi na ibe weebụ. Ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ n'iwepụ ọtụtụ ibe weebụ, ịkwesịrị ịme ihe mmemme.